Waa maxay xakameynta taabshada?
Jeermiska qaarkiis si fudud ayuu hawa ahaan ugu sii gudbi karaa bukaannada kale. Xakameynta taabashada waa hab looga hortago in xanuun la isu gudbiyo.
Taabashada tooska ah waxaa loola jeedaa taabashda jirka dadka, badanaaba gacmaha. Taabashada aan tooska ahayn waxaa loola jeedaa taabashada wax wasakheysan, sida alaabta carruurtu ku ciyaarto, dharka, ama meelo kale dushooda. Badanaaba arrintaasi waxa ay dhacdaa marka marka gacmaha oo jeermis wata lagu taabto oogada meelo kale oo uu qof kale taaban doono.
Maxaa ilmahayga loogu daray xakameynta taabashada?
Sababta ilmahaaga loogu daray xakameynta taabashada waa xanuun uu qabo ama qabi karo. Xakameyntan waa sida lagu yareeyo fursadaha ay ku dhici karto in ilmaha kale uu wax jeermis ah u sii gudbo.